चिरञ्जीवी ओली : कोरोना माहमारीको समयमा जनताको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्ने पहिलो काम सरकारको हो । सकेन भने सहयोगका लागी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरोस, निजी क्षेत्र सकेको सहयोग गर्न तयार छ । निजि क्षेत्रले हिजो गरेको पनि हो भोली पनि गर्ने छ ।
यो कोरोना माहमारीमा नेपालगंज उद्योग बाणिज्य संघलाई कस्ले सहयोग माग्यो र सहयोग पायन ? भन्नु पर्यो ? आबश्यकता के हो ? कोरोनाको पहिलो लहरमा हामीले प्रसासनसंग समन्वय गरेर अति आबश्यक सामान बिक्रीगर्ने सबै उद्योगी ब्याबसायीहरू लाई आफै दिनभर ड्यूटी दियर पास बितरण गरेकै हो । सस्तो घुम्ती सेवा पनि संचालन गरेको हो ।
त्यस्तै सोही समयमा भेरी हस्पिटललाई गरेको सहयोगबाट अहिले पनि बिरामीहरूले लाभ लीरहेकै अबस्था छ सो समयमा कोरोना वार्डका लागी नेपालगंज उद्योग बाणिज्य संघले अक्सीजन पाएप सहयोग गरेको थियो। सो समयमा पी.पी.इ , मास्क, सेनिटाइजर ग्लोबसहरू जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्री स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत फ्रंटलाइनमा बस्नेलाई कती सहयोग भयो भन्ने कुरा समन्धित ठाऊँमा वा हाम्रो कार्यालयमा आयर बुझ्न सकिन्छ ।
भर्खर मात्रै बाँकेको नरैनापुरमा आगलागी पीडितलाई संघले खाद्यान्न सहयोग गरेको थियो । सकेको गर्ने नै हो र गर्नु पर्छ । यी सबै सहयोगमा यहाँका उद्योगी ब्याबसायीहरूको साथ र सहयोग छ ।
साथीहरु प्रश्नहरू गर्न सजिलो छ । कतीले आईसोलेसन सेंटर बनाउने कुरा गर्नु हुन्छ, के आइसुलेसन बनाएर मात्र हुन्छ ? सो का लागी चिकित्सक सहितको स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्दैन ? नेपाल सरकारलाई त स्वास्थ्यकर्मी अपूग भैरहेको समयमा हामीले ब्यबस्थापन गर्न संभब छ ?
उद्योग बाणिज्य संघले आफुसंग भयको साधन श्रोतलाई प्रयोग गरेर के गर्न सक्छौ त्यो कुरामा आउनु पर्छ । हामी संग भयको एम्बुलेन्सले सक्नेलाई सशुल्क र नसक्नेलाई निशुल्क सेवा दीरहेकै छ । जति बेला कल गर्नुस एम्बुलेन्सले सेवा दिएकै छ ।
हालका दिनमा कुनै दिन एम्बुलेन्स खाली बसेको छैन कसै न कसैलाई सेवा दीरहेको नै छ । यत्रो साधन श्रोत भयको सरकार त यस्तो अबस्थामा छ भने निजी क्षेत्रको छाता संगठनले के गर्न सक्ला ? के उद्योग बाणिज्य संघ सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय हो ? कुनै सरकारले अहिले सम्म बजेट दिएको रेकर्ड छ ? उद्योग बाणिज्य संघ भनेको दबाद मूलक संस्था हो ?
हामीले दबाद दिने हो अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको संक्रमितको उपचार गर्ने हो सो का लागी आबश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकारलाई दबाद दिने हो र सरकारले नसक्ने भय हातेमालो गर्ने हो हामीले गर्न सक्ने यही नै हो ।
दोश्रो आबश्यकता भनेको सबै नागरिकलाई कोरोना बिरुद्धको भ्याकसिन चाडो भन्दा चाडो सशुल्क या निःशुल्क लगाउने ब्यबस्थाका गरीदिनका लागी सरकारलाई संस्थागत रुपमा दबाद दिने हो । यस बारेमा हामीले संस्थागत निर्णय गरेका छौ । यसमा तपाई हामी सबै लागौ, दबाद दिउ राजनीति नगरौ जसले जहाँबाट जून च्यानल प्रयोग गरेर दबाब दिन सकिन्छ दबाद दिउ ।
भ्याकसिनलाई दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा बनाऊ किनकी कोरोनाको औसधि छैन अब जनजीबन समान्य गर्ने अस्त्र भनेको भ्याकसिन नै । बिरामी भएका उद्योगी ब्यबसायीहरुलाई सहजता प्रदान गर्ने नियमित सम्पर्क गर्ने हौसला दिने कामहरु उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष, पदाधिकारी लगायत कार्यसमिति सदस्यहरूले गरेकै छौ कतीपय बिरामी हुने उद्योगी ब्यबसायीहरुलाई हामी आफै गाडीमा हालेर हस्पिटलसम्म लगी बेडको ब्यबस्थापन गर्ने लगायतका कामहरु भैरहेकै छन ।
कतीपय यस्ता कामहरू छन की हामी स्वयम भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन घरमै बसी फोन मार्फत धेरै कुराहरूको ब्यबस्थापन गर्न सकिन्छ र गरेका तमाम उदाहरणहरू पनि छन त्यो कुरा सेवालीने साथीभाई तथा बिरामिहरुले महसुस गरेको कुरा हो । त्यति मात्र नभएर कुनै बिरामीको निधन भय पश्चात शब ब्यवस्थापनका कामहरू समेत संघले गरेको छ ।
यति भन्दै गर्दा हाम्रो एउटा कमजोरी रह्यो , यो सबै गर्दा मोबाइलमा सेल्फीहानि फेसबुकमा अपलोड गरेनौ । फोटो खिच्नेमा हाम्रो ध्यान गएन । हो यो हाम्रो कमजोरी हो अहिलेका के ही फेसबुकमा स्टेटस हाल्ने साथिहरुले त्यही नै खोजेको हो त ?
त्यसकारण साथिहरु मैले भर्खरको हाम्रो कार्यसमिति बैठक बस्नु अघि यो बिषम परिस्थितीमा उद्योग बाणिज्य संघले के गर्दा ठीक होला भनेर सुझाब समेत माँगेको थिय । आयका सुझाबमा छलफल समेत गरियो । अहिले पूरै आत्तिहालनु पर्ने अबस्था छैन बाँकेमा भएका २ वाट कोभिड अस्पतालले बिरामीहरूको उपचार सकेजती गरिरहेको अबस्था छ ।
हस्पिटलमा बेड नपायर फर्केका घटनाहरू हाम्रो यहाँ देखिदैनन, तसर्थ तेस्रो लहरका कुरा पनि आइरहेका छन सो का लागी के तयारी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा डाक्टरहरूको टीम संग छलफलहरू चलाईरहेका छौ । अब भेरी हस्पिटलमा बेड संख्या बृद्धि गर्दा हाम्रो उपस्थिती देखाउने कोसिसहरू हुनेछन ।
सरकारसंग पर्याप्त साधन श्रोत भयको समयमा हामी जान्ने बनेर सस्तो लोकप्रियताको निम्ति यो गर्छौ त्यो गर्छौ भन्ने कुरा ठीक होइन । राज्यले हाम्रो उपस्थिती कहाँनेर आबश्यक ठन्छ सोका लागी हामी तयार भयर बस्नु पर्छ र बसेका पनि छौ । उद्योग बाणिज्य महासंघले गरेका बिभिन जूममीटिंगहरूमा नेपाल सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीहरू संग छलफल गर्दा बाँकेको अबस्था र तत्काल गर्नुपर्ने कामको विषयमा अध्यक्ष ज्युले प्रस्ट संग राख्ने कामहरू भएका छन ।
संग-संगै सबै तर्फबाट दबाद जादा भेरी हस्पिटलका लागी बिभिन्न समयमा बजेटहरू आएको कुरा सर्बविदितै छ । अहिले हस्पिटलमा बजेटको अभाब देखिदैन । फेसबुकमा उद्योग बाणिज्य संघले केही गरेन भन्नु भन्दा पनि सकिने खालका काम यो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने सुझाब दीदा राम्रो हुन्थ्यो ।
संस्था तपाई हामी सबैको हो । तपाईको पनि जिम्मेवारी छ संस्थाको हितमा बोल्ने र लेख्ने । सकारात्मक सोचका साथ आयका सुझाबलाई हामी शिरोधार्य गर्छौ । सहयोगका नाममा बाहिर निस्कने गर्दा संक्रमितसंग नजिक भइ संक्रमण बढ़ने र कती अग्रज, साथीभाईहरू कोरोना संक्रमित भएका घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौ पहिले तपाई हामी सुरक्षित हुनुपर्छ ।
यो समयमा ब्यबसाय संचालनका नाममा अनावश्यक भीड़भाड़ गर्ने बजार निस्कने काम ठीक होइन । पहिले आफु बच्नु पर्छ । कोभिड नियंत्रण पछि पैसा कमाउला यो समय बच्ने र बचाऊने हो । अझै अहिले केही ब्यबसायीले कालाबजारी गरेका समाचार पनि आयका छन त्यो कदापि हुनुहुदैन । त्यस्तालाई हाम्रो साथ सहयोग हुदैन ।
अन्तमा यो कोरोनाको समयमा उद्योग बाणिज्य संघको बिरोध गरेर कोरोना नियंत्रण हुदैन ।त्यसका लागी उत्कृष्ट सुझाब चाहिन्छ । रचनात्मकता सुझाबको अपेक्षा सहित तपाई हामी लड़ने होइन तपाई हामी मिली कोरोना बिरुद्ध लड़ने हो । कोरोनालाई परास्त गर्ने हो र अहिले संक्रमण भई उपचार गरीरहनु भएका सबै उद्योगी ब्याबसायी लगायात बाँकेबासीको सीघ्र स्वास्थ्य लाभकोकामना गर्दछौं । धन्यवाद ।
(ओली नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव हुनुहुन्छ )
युवा संघको भेलालाई सम्बोधन गर्न माधव नेपाल नेपालगन्जमा